၁.၅ မီတာအရည်ပျော်သောလွင့်စက်၊ Pp Spunbond Nonwoven Machine - Meiben
Hebei Meiben နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်Beijing-Tianjin-Hebei ပြည်နယ်၏အစွန်အဖျားရှိ Xiong'an နယူးခရိုင်တွင်လှပသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေစွာတည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒီဇိုင်းရှေ့ဆောင်များရှိသည်။ ဖောက်သည်ကိုပထမ ဦး စားပေးသည့်အရောင်းနှင့်ရောင်းပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့တင်ပို့မှု
Spunbond nonwoven ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း SMS Surgica ...
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း SMS ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ၀ တ်စုံ SMS မဟုတ်သောအထည်အလိပ်စက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေး SP Spunbond Nonwoven အထည်ထုတ်လုပ်မှု Lin ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးအထည်အလိပ်၏လက္ခဏာများ ၁။ ပေါ့ပါးသည်။ Polypropylene resin ကိုထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆွဲအားမှာ ၀.၉ သာဖြစ်သည်။ ဝါဂွမ်း၏ငါးပုံသုံးပုံသာရှိသည်။ ဒါဟာ fluffy ဖြစ်ပြီးကောင်းသောခံစားရ; 2. နူးညံ့မှု - ၎င်းကိုအမျှင်များ (2-3D) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအလင်း - အပူအရည်ပျော်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အချောထုတ်ကုန်အတန်အသင့်ပျော့ဖြစ်ပါတယ် ...
SMS PP အရည်ပျော်မှုမရှိသော ...
ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောအထည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ၁။ ကတ်ထူပြား ၂။ ဝဘ်သို့အမျှင် ၃။ ဖိုင်ဘာပိုက်ကွန်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ၄။ အပူကုသမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ၅။ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနေ့စဉ်လိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းကိုအ ၀ တ်အထည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပစ္စည်းများ၊ ကုလားကာများ၊ နံရံအလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ အနှီးများ၊ ခရီးသွားအိတ်များစသည်တို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များတွင်၎င်းကိုခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ လူနာဝတ်ရုံများ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ သန့်ရှင်းရေးခါးပတ်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လိုင်းပုံစံ ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးအထည်အလိပ်၏လက္ခဏာများ ၁။ ပေါ့ပါးသော - ပလပ်စတစ်သတ္တုသည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဆွဲအားမှာ ၀.၉ သာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝါဂွမ်း၏ငါးပုံသုံးပုံသာရှိသည်။ ဒါဟာ fluffy ဖြစ်ပြီးကောင်းသောခံစားရ; 2. နူးညံ့မှု - ၎င်းကိုအမျှင်များ (2-3D) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအလင်း - အပူအရည်ပျော်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ချောထုတ်ကုန်အတန်အသင့်ပျော့ပျောင်းသောအဆင်ပြေသည်, 3. ရေတွန်းလှန်နိုင်ပြီးအသက်ရှုနိုင်သော: Polypropylene ချပ်များသည်ရေကိုစုပ်ယူခြင်းမရှိ၊ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသည်။
Spunmelt ပေါင်းစပ်မဟုတ်သော ...
Meltblown nonwoven ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမဟုတ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကောင်းကျိုးများ ၁။ ရက်မလုပ်သောပစ္စည်းများ၏စီးဆင်းမှုတစ်ခုလုံးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်ပြီးလူ ၁ မှ ၂ ဦး သာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်လုပ်အားကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သက်သာစေသည်။ 2. ယက်မဟုတ်သောထည်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားကိုအကွာအဝေးအတွင်းထိန်းညှိနိုင်သည်။ ရက်ကန်းမဟုတ်သောထည်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် touch screen စစ်ဆင်ရေးကိုအသုံးပြုသည်။ ပုံသေအလျား၊ အဆင့်မြင့်ဓာတ်ပုံခြေရာခံခြင်း၊ အလိုအလျောက်ရေတွက်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိုးနှက်ခြင်းစသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
PP Meltblown ကုန်ပစ္စည်း ...
ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောထည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ယန္တရားမဟုတ်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ SS (Prodnct width) 1600mm 2400mm 3200mm ပစ္စည်း 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m အမြန်နှုန်း 350m / min 350m / min 30m / min Gram အလေးချိန် 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / m2 အထွက်နှုန်း (20g / M2 အရထုတ်ကုန်များ) 9-10T / Days 13-14T / Days 18-19T / Days ITEM ထိရောက်သောအကျယ်လိုင်းဂျီအက်စ်အမ်နှစ်စဉ်ထွက်ပေါ်လာသည့်ပုံသဏ္Sာန် S 1600MM 8-200 1500T စိန်၊ ဘဲဥပုံ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်မျဉ်းကြောင်း S 2400MM 8- 200 2400T စိန်၊ ဘဲဥပုံ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်မျဉ်းကြောင်း S 3200MM ...